Krkonoše Park, Krkonoše National Park, Krkonošský národní park - Krkonoše
Eoropa Repoblika Tseky Tendrombohitra goavambe
Adiresy: Harrachov, Krkonose, Repoblika Tseky
Area: 385 sq. M. km
Taonan'ny fototra: 1963
Tel: +420 499 456111
Raha te hiditra amin'ny Arktika any afovoan'i Eoropa ianao dia mitsidiha ny Valam-pirenena Krkonoše (Valam-pirenena Krkonoše na Park Krkonošský národní). Tendrombohitra miitatra avy any atsinanana ka hatrany andrefana ary mandray ny faritra avaratr'i Repoblika Tseky sy atsimo-andrefan'i Polonina.
Ny faritra fiarovana ny natiora dia mandrakotra kilaometatra kilometatra 385 km. km. Niorina tamin'ny taona 1963 izy io ary mampiseho ny tontolo tsara tarehy iray miaraka amin'ny fiompiana zana-tany tsy manam-paharoa izay niforona teo ambany fitarihan'ny ranomandry. Ny elanelan'ny vatolampy dia rakotra ala sy ala matevina ary ranom-boaloboka mivolombolamena. Ny tampon'ilay valan-javaboary Krkonoše dia mahatratra marika 1602 m ary antsoina hoe Snezka . Etsy ankilan'izay, io no avo indrindra amin'ny Repoblika Tseky.
Ny komity manokana, izay miorina ao Vrchlabi, dia mitantana ny faritry ny fiarovana ny natiora. Ny fitantanam-panjakana dia manara-maso ny fampiroboroboana ny fametrahana varahina vy sy varahina varahina, ary koa ny fitrandrahana arintany mafy. Ny tanjona fototra amin'ny fananganana zaridaina nasionaly dia ny fiarovana ny natiora eo an-toerana.
Mihamaro eo ho eo ny karazan-javamaniry misy eto, ka maro amin'izy ireo no tsy fahita firy. Tamin'ny taona 1992, ny valanjavaboa dia notondroina ho UNESCO ho an'ny Tandrefana eran-tany ho toy ny tahirin'ny biosphere.
Fahitana ny valan-javaboary
Ny faritry ny Tendrombohitra Giant dia manana lalana fizahan-tany mahavariana. Ho hitanao mandritra ny fitsidihana ny faritra voaaro:
Ny loharanon'ny renirano Elbe dia eo amin'ny 1387 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Izy io dia manondro peratra mivaingana, voaravaka amin'ny sandrin'ireo tanàna, izay mamakivaky ny renirano. Io toerana an'ohatra io dia tena malaza eo amin'ireo mpandeha.
Obří-Dul dia fanamboarana, nefa, eny, ny lalana tsara tarehy indrindra any an-tampon'ny tendrombohitra. Manana fialambolan-tany izy io ary nahasarika mpankafy natiora ela.
Ny Tendra dia tundra lehibe iray, izay manana tontolo voajanahary tany am-boalohany.
Elbe ny renirano - dia mitovy amin'ny lohasaha ary manana haavo 45 m.
Ny vato sy ny an'ny lehilahy dia ny endriky ny vato miforona vita amin'ny granita eo ambany fitarihan'ny rivotra mahery.
Labski Dul dia akorandriaka vato malaza izay an'ny toerana be mpitsidika indrindra ao amin'ilay valan-javaboary.
Panchavsky Grotland dia faritany midadasika izay misy toeram- piantsenan'ny tendro avaratra. Eto ny renirano Panchava dia mamoaka ny loharano, mamoaka rano mihandrona. Ny haavony dia mihoatra ny 140 m. Ny renirano Panchavsky dia heverina ho iray amin'ireo mahatalanjona indrindra amin'ny faritra voaaro.
Ny vato Harrap dia mitoka-bozaka vita amin'ny granita izay maniry eo amin'ny hantsana mihetsiketsika. Izy ireo dia voajanahary voajanahary, raha ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia toy ny goro lehibe antsoina hoe Great Boiler House.
Bozaka - eto dia azonao atao ny mahafantatra ny famokarana ny fisotroan-drongony, ary manandrana ny karazany eo an-toerana.
Azonao atao ny mitsidika ny Krkonoše amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Amin'ny volana fahavaratra, ireo mpizahatany dia afaka:
Mandeha miaraka amin'ny ala be-boankazo sy ala kesika, kesika sy jirofo;
Mandeha bisikileta amin'ny lalana fizahantany;
mandresy ny tampon'ny Tendrombohitra Giant;
Tsidiho ny tranokalan'i Hvoynik;
mankamamy ny toetra maloto.
Ao amin'ny zaridaina Krkonoše dia misy trakitra maoderina. Io toerana io no heverina ho tsara indrindra ao amin'ny Repoblika Tseky ary natao ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ririnina. Afaka mandeha amin'ny ski na snowboarding ianao any amin'ireo tanàna kelin'i Spindleruv Mlyn , Petz-Pod-Snezkoy , Janske-Lazne, Harrachov, sns. Matetika izy io no miara-milalao amin'ny sambon-tongotra.
Ny faritr'ilay Krkonose dia manana labia, izay ahafahanao miala sasatra mandritra ny fitsangatsanganana. Eto, ireo mpizahatany dia voarara tsy hikorontana, hikiakiaka sy hiteraka fahasimbana eo amin'ny natiora, ary ny fako dia tsy maintsy arotsaka araka ny lanjany.
Avy any amin'ny renivohitry ny Repoblika Tseky mankany Krkonoše dia afaka mandeha eny amin'ny arabe 16, 32, D11 D10 / E65. Ny halavirana dia 150 km.
St Mark's Island
Town Hall (Bruges)
Katedra of the Virgin Mary (Tromsø)
Estonian Museum Architect
Inona no hitondra any amin'i Mallorca?
Tranom-bakoky ny fanjakana any Liechtenstein
Kara Delevin nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany tany Meksika amin'ny orinasa fiarahan'ny ankizivavy
Chandelier amin'ny fifehezana remote
Loko mody amin'ny akanjo 2016
Vehivavy jaketa - ireo modely lamaody indrindra sy ny fomba tokony hitondrany azy?
Ny rivodoza voalohany dia famantarana
Tuberkulose amin'ny taovam-pananahana - fitsaboana maoderina
Valan-javaboary an-taonany vao teraka - vokany
Toaka mamy ho an'ny tebureks
Kitapo ho an'ny fahavoazan'ny ratra - transdermal, dipoavatra ary solifara matevina ho an'ny fatiantoka
Fampiharana mahomby ho an'ny gazety
Quentin Tarantino "nanazava" ny kintany tao amin'ny Hollywood Walk of Fame
Akanjo fohy amin'ny fizarana 2017 - ny endrika tsara tarehy sy lamaody sy loko
Skateboard an'ny ankizy
Vatana mangatsiaka ho an'ny vavony
Herinandro 31 isaky ny fitondrana vohoka - ny toetry ny ultrasound
Presley Gerber, zanaky ny modelin'i Cindy Crawford, dia nanodina an'io tantara io tamin'ny modely
Bibilava misy saka volamena chinchilla